प्रचण्ड ओलिकाे फेला पर्नुु भयाे – डा. बाबुराम भट्टराई – Paluwa Khabar
प्रचण्ड ओलिकाे फेला पर्नुु भयाे – डा. बाबुराम भट्टराई
कार्तिक १८, २०७७ मंगलबार 85
बाहिरबाट देख्नेले बाबुराम पनि नेकपामा जाँदै छ है भनेर गलत टिप्पणी गर्ने गरेको उनले बताए। ‘ओली गणतन्त्र र संघीयताका विरोधी हुन् भन्ने थाहा थियो। कम्युनिष्ट होइनन् भन्ने पनि थाहा थियो। लौ डुबियो, बर्बाद भयो कमरेड भनेर प्रचण्डजी सँधै बिलौना गर्नुहुन्छ।’ – साभार अन्नपूर्ण पाेष्ट
Prevसभापति देउवाले भने काग्रेस बिग्रिएकाे जिम्मा रामचन्द्रले लिनु पर्छ
Nextभुमिहिनकाे समस्यामा सरकार उदासिन
फेरी अर्काे ख’तरा,२ दिन पछि पृथ्वीमा उल्का पिण्ड खस्दै, वैज्ञानिकहरूले दिए यस्ताे चे’ता’वनी ।
आमाछोराको अ’नैति’क स’म्बन्धबाट आमा गर्भवती भएपछि…(भिडियो सहित)
अस्ट्रेलियामा नेपालीद्वारा सञ्चालित कलेजलाई अवार्ड प्रदान
पर्खाल भ’ त्किदा ७ जनाको मृ’ त्यु ।